UTom Hlala×Iblueterra_ ukuphuma kwelanga ukusuka ebhedini, ukujonga ulwandle, imizuzu emi-5 ukuya elunxwemeni, ibhedi yobusi, iNetflix
Sokcho-si, Gangwon Province, South Korea
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe ongu탐리
Wamkelekile eTamstay :)
Indawo esihlala kuyo yihotele entsha kufutshane neSokcho Beach, Express Bus Station, E-Mart, Oeongchi, njl.
_Ukwenzela ibhedi etofotofo yeendwendwe zethu, silungiselele ngononophelo olukhulu ukukhulula ukudinwa kokuhamba kangangoko sinakho, ukusuka kowona matrasi ugqwesileyo weSimmons ukuya kubukhulu benkosi enkulu kunye nebhedi ethambileyo yemodal.
Zonke iibhedi zitshintshwa kukuvalwa kobushushu obuphezulu emva kokusetyenziswa kanye.
Qiniseka kwaye ukhulule ukudinwa kwakho emva kohambo :)
_Ungonwabela umbono wepanoramic yolwandle phambi kwendawo yethu yokuhlala ejongene neJeongdong. Ngokuvisisana nolwandle, ungonwabela isiqithi esincinci iJodo, indawo entle yaseSaemaeul, kunye nehlathi.
Yonwabela ukuphuma kwelanga ngelixa usonwabele ikomityi yeti ebhedini okanye kwi-terrace yangaphandle!
Umbono wobusuku nawo ulungile ngokwenene :)
Gcina iinkumbulo ezintle emehlweni akho nasentliziyweni yakho!
_Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukwenza inkumbulo entle yohambo lwakho ngolawulo olucocekileyo kunye nempendulo enobubele. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda uqhagamshelane nathi nangaliphi na ixesha! enkosi♡
Ukuthintela ukusasazeka kwe- _COVID, indawo yokulala ikhupha iintsholongwane mihla le kunye nokubulala iintsholongwane.
_Indawo yethu yokuhlala ilungiselelwe abantu ababini, kodwa ukuba kukho abantu abongezelelweyo, njengeentsapho, nceda uqhagamshelane nathi :)
_ Ulwandle lwaseSokcho 500m (malunga nemizuzu emi-5 ngeenyawo)
I-Express Bus Terminal 700m (imizuzu emi-2 ngemoto, ngaphakathi kwemizuzu eli-10 ngeenyawo) i-E-Mart, i-Oeongchi Badahyanggi-gil, njl.njl. zifikeleleka lula
_Siza kwenza konke okusemandleni ethu ukwenza inkumbulo entle yohambo lwakho. enkosi♡
Umbuki zindwendwe ngu- 탐리
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Sokcho-si